Muxuu Ku Salka Ku Hayaa Qilaafka Soo Kala Dhexgalay Pep Guardiola Iyo Taageerayaasha Manchester City? | Laacib.net
Muxuu Ku Salka Ku Hayaa Qilaafka Soo Kala Dhexgalay Pep Guardiola Iyo Taageerayaasha Manchester City?
January 28, 2020 Balaleti Comments Off on Muxuu Ku Salka Ku Hayaa Qilaafka Soo Kala Dhexgalay Pep Guardiola Iyo Taageerayaasha Manchester City?
Manchester City ayaa lagu dhaleeceeyay taageerayaasha tirada yar ee soo xaadiray kulankoodii isbuucaan.
Etihad Stadium ayaa noqday garoon ku maadeystaan taageerayaasha kooxaha kale mar kasta oo la soo sawiro qeybo ka mid ah garoon oo faaruq ah iyadoo lagu ciyaarayo.
Waxayna taasi dhacday kulankii ay Man City 4-0 kaga badiyeen kooxda heerka labaad ee Fulham ee ka tirsanaa wareega afaraad ee FA Cup.
Tababare Pep Guardiola ayaa kulankaas ka dib la weydiiayy xaqiiqda ah in kaliya 39 kun taageerayaal ah ay daawadeen kulankii Fulham.
“Maanta garoonka ma buuxin – mana garanayo sababta” ayuu tababaraha reer Spain u sheegay BBC Sport. “Haatan waxaan heysanaa seddex maalmood oo aan isagu diyaarino kulanka Man United. Waxaan rajeynayaa in taageerayaasheena ay imaan doonaan oo ay buuxin doonaan garoonka.”
Si kastaba, hadalkiisa waxaa ka carooday taageerayaasha Manchester City, iyadoo xoghayaha guud ee ururka ay ku mideysan yihiin taageerayaasha City Kevin Parker uu jawaab adag ka bixiyay hadalka Pep Guardiola.
“Aad ayaan uga niyadjabay hadalka Pep, mana fahmin ujeedka hadalkiisa” ayuu Parker sharaxaad ku bixiyay.
“Wuxuu ka qeyb qaadanayaa kuwa nagu dhaleeceynaya in garooka Etihad uu faaruq yahay ee inoo bixiyay ‘Emptyhad’. Aad ayay runtii iiga careysiisay hadalkiisa.
“Waxaan dareemeynaa in kooxaha kale ay si aan cadaalad aheyn noogu maadeystaan, sidaasi darteed in tababaraheena uu isna qeyb ka noqdo dadkaas waa ay ka sii xun tahay. Waxaan qabaa inuusan ka warqabin xaalada dhaqaale ee dhabta ah ee taageerayaasha kubada cagta.
“Pep waa inuu aqbalo in taageerayaasha kooxda ay yihiin xoogsato lacagtooda ku qarashgareeya kubada cagta, sidaasi darteed waa inuu joojiyaa digashada.
“Ma ahan inuu su’aal ka keeno daacadnimada taageerayaasha soo sabrayay 35 sannadood oo koob la’aan ah.”
Pep Guardiola ayaa qirtay maanta qaladkiisa isagoo u jawaabay ururka taageerayaasha Man City: “Marnaba ujeedkeyga ma aheyn inaan iyaga xumeeyo, qeyb ayay naga yihiin. Waxaan doonayaa inaan arko Etihad oo buuxa oo ay dadku ku riyaaqayaan kubada. Laakiin dabcan waan fahmi karaa in dadku ay ku adag tahay dhaqaale ahaan.”